Indlela yokuchonga ukhula oluqhelekileyo lwengca
NguLance Walheim, uMbutho weSizwe weeGadi
Akukho mntu uyithandayo ingca eluhlaza. Ukulandela kukho i-16 yokhula olunzima kakhulu, kunye nolwazi lokukunceda ukuyiqonda nokuyilawula, ukuze ube neyona nto inqabileyo engenalo ukhula kwibloko:
I-bluegrass yonyaka: Ibluegrass yonyaka yingca eluhlaza eqaqambileyo yonyaka enee-seedheads ezinika ingca imhlophe, ibala elimhlophe. I-bluegrass yonyaka ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yingca yasebusika kwiindawo ezinemozulu enobusika apho ibonisa khona ingca yaseBermuda engca. (Ingca eleleyo imdaka.)
Umhlaba odibeneyo womoya. Sika phezulu ukuze uphume izithole. Sika rhoqo, ukuze iintloko zembewu zingakhuli. Amanzi kuphela xa kukho imfuneko. Faka iyeza lokubulala iintsholongwane ngaphambi kokuvela ekuqaleni kwehlobo. Ukunyanga indawo nge-herbicide ekhethiweyo engceni yeBermuda yengca.
Ingca yeBermuda: Ingca yeBermuda luhlaza ocacileyo, nengca engapheliyo enamagqabi aluhlaza. Isasazeka ngokukhawuleza ngembewu, izitokhwe (ezinambuzelayo, iziqu ezingaphezulu komhlaba), kunye neerhizomes (iziqu ezingaphantsi komhlaba). Iintloko zembewu zicwangcisiwe njengeehelikopta.
Kunzima ukulawula ngaphandle kokubulala ukhula, ekugqibeleni iBermuda ingca ithatha indawo kwaye iba yingca kwiindawo ezininzi ezinobusika. Ukuvela kwangaphambili kunokuthintela imbewu ukuba ingantshuli. Unokubona ukunyanga izityalo esele zikho nge-glyphosate emva koko uphinde utyale (i-glyphosate ibulala yonke into) okanye uhlaziye ingca iphela. Ngaphandle koko, ukuba uzama ukugcina ingca yakho yexesha elipholileyo, qiniseka ukuba ikhula ngamandla ngokuyikhathalela ngokufanelekileyo.
I-Broadleaf plantain: I-Broadleaf plantain inamagqabi aluhlaza aqaqambe ahlala ekrwada.
Umhlaba odibeneyo womoya. Kuphephe ukuntywila emanzini. Olu khula kulula ukulutsala ngesandla xa isityalo sincinci. Ulawulo olunemveliso efanelekileyo, ebhalwe ukhula kunye nokondla iimveliso.
iipilisi zokulawula ukuzalwa mononessa
IBurclover: I-Burclover kulula ukuyichonga ngokukhanya kwayo okuluhlaza, amagqabi afana ne-clover, iintyatyambo ezityheli, kunye nembewu ye-spiny yembewu (i-bur).
Khathalela ngcono ingca. Umhlaba opholileyo ukuphucula ukungena kwamanzi. Amanzi ngokufanelekileyo kwaye uchumise kumanqanaba acetyiswayo.
Crabgrass: Amagqabi eCrabgrass aluhlaza-luhlaza, ahlala enombala omfusa, kwaye enza isangqa esiqinileyo, esiqinileyo, esifana nonkala (kungoko igama). Iziqu ziyasasazeka. Iintloko zembewu zenzeka ehlotyeni kwaye ziyawa kwaye zinokufikelela kwiinyawo ezininzi ukuphakama ukuba azichetywa.
g 32 iipilisi
Ukukhulisa ingca eshinyeneyo, esempilweni kokona kuthintelwa. Ke nyusa isondlo sakho kunye namanzi, isichumiso, kunye nokuchetywa ngokufanelekileyo. Tsala ngesandla izityalo ezizodwa ngaphambi kokuba zibeke imbewu. Imveliso efanelekileyo yeleed-weed-feed-feed nayo iyasebenza.
Ingca yaseDallis: Ingca yeDallis inamagqabi aluhlaza ocacileyo kwaye iintloko zembewu zijongeka kancinci njengomsila wenyoka.
Ukukhulisa umoya ngokuphucula amanzi. Lungisa iizitshizi ukuvumela indawo ezimanzi ukuba zome phakathi konkcenkceshelo. Bamba izityalo ezizodwa (qiniseka ukuba ufumana iirhizomes ezimfutshane kangangoko) kwaye uzihlaziye kwakhona. Imveliso yokhula kunye nokondla kubonelela ngaphambi okanye emva kokuvela kolawulo.
Idandelion: Olu lukhula olungapheliyo lunamagqabi amthubi kunye neepuffball seedheads ezinamagqabi aluhlaza ocacileyo kunye nescalloped.
Tsala izityalo ezizodwa nanini na uzibona. Sika iintyatyambo ngaphambi kokuba zenze imbewu. Sebenzisa imveliso efanelekileyo, ebhalwe ukhula kunye nokondla.
Nangona: I-Dock ikhula njenge rosette eqinileyo yamagqabi aluhlaza amnyama kunye nesiqu esineentyatyambo ezinde ezijika zibe rusty brown xa isoma.
Ukukhulisa umoya ngokuphucula amanzi. Vumela ingca ukuba yome phakathi kwamanzi. Bamba izityalo ezizodwa ngesandla. Nciphisa umthunzi ngokuthena imithi. Cima naziphi na iintloko zembewu ezenzileyo.
IsiNgesi daisy: Le midlalo ikhulayo iphantsi ekhula ngokukhawuleza, imhlophe ngeziko elityheli, iintyatyambo ezifana ne-daisy kunye namagqabi aluhlaza ocacileyo.
Abanye abantu balushiya lodwa ukhula- bayazithanda iintyatyambo. Ngaphandle koko, tsala ngesandla kunye namanzi kwaye uchumise ngokufanelekileyo. Imveliso efanelekileyo yeleed-weed-feed-feed nayo iyasebenza.
Umhlaba we-ivy: Amagqabi aluhlaza ocacileyo, ajikeleze macala. Incinci, iintyatyambo ezimhlophe zivela entwasahlobo.
isetyenziselwa ntoni i-osteo bi flex
Khathalela ngakumbi ingca yakho ngokunkcenkceshela okufanelekileyo kunye nesichumiso. Khupha izityalo ezincinci ngesandla. I-Spot-phatha uhlaselo oluncinci nge-broadleaf herbicide kwaye uphinde utyale. Faka imveliso efanelekileyo, ebhalwe ukhula nokondla imveliso.
I-Henbit: Amagqabi amancinci, angqukuva, amenyezelwayo avela ngababini ecaleni kwesikwere kwaye anoboya. Ipinki ukuya kwintyatyambo emfusa ngaphezulu kwesiqu esime nkqo ekwindla nasentwasahlobo.
Olu lukhula kulula ukulutsala ngesandla. Gcina ingca ikhula ngamandla kwaye uyicheba kakuhle. Faka imveliso efanelekileyo, ebhalwe ukhula kunye nokondla imveliso.
IMallow: IMallow inayo uluhlaza mnyama, usisazinge, ubumbeke kakhulu, amagqabi.
IMallow kunzima ukuyilawula. Tsala ngesandla ingca entsha. Gcina ingca ikhula ngamandla kwaye ucheba kwindawo efanelekileyo. Faka imveliso efanelekileyo, ebhalwe ukhula nokondla imveliso.
Oxalis: I-Oxalis inamagqabi aluhlaza ogqamileyo aluhlaza kunye neentyatyambo ezincinci ezityheli.
ip 109 ipilisi emhlophe engqindilili
I-Oxalis kunzima ukuyilawula, nokuba inokubulala ukhula. Gcina ingca ikhula ngamandla ngamanzi afanelekileyo nesichumisi. Nyanga indawo ezincinci ngeyeza elibanzi. Ixesha ngononophelo lokusetyenziswa kwemveliso yokhula kunye nokondla. Ungadinga ukuphinda usetyenziso ukubonelela ngolawulo. Landela imiyalelo yelebhile ngononophelo.
I-knotweed yokuprostrate: I-Prostrate knotweed inamagqabi amancinci, ajongileyo, aluhlaza-luhlaza. Zincinci, zimhlophe zityheli iintyatyambo zenza iziqu ehlotyeni ukuwa.
Tsala izityalo ezizodwa ngesandla, uqiniseke ukuba ufumana isithsaba kunye neengcambu. Iindawo ezixineneyo eziphakathi. Sebenzisa imveliso efanelekileyo, ebhalwe ukhula kunye nokondla.
Ispurge esichaziweyo: I-spurge enamachokoza inamagqabi amancinci aluhlaza, ngalinye linendawo ebomvu.
Gcina ingca ikhula ngamandla kwaye ucheba kubude obuchanekileyo. Tsala izityalo ezizodwa. Faka imveliso efanelekileyo, ebhalwe ukhula nokondla imveliso.
Inutsedge etyheli: Esi siduli singapheliyo sinamacala amathathu kwaye sinombala oluhlaza tyheli, amagqabi afana nengca. Intyatyambo ende, emdaka ngombala etyheli ibonakala ehlotyeni.
Olu lukhula kunzima ukululawula. Ukukhulisa umoya ngokuphucula amanzi. Vumela ingca eyomileyo ingene phakathi kwonkcenkceshelo. Tsala ukhula ngesandla xa umncinci kakhulu. Ukunyanga izityalo ngamayeza afanelekileyo anelebheli. Tyala kwakhona xa kukho imfuneko.
iipilisi ze-ivermectin zabantu
ingakanani edityaniswe kwipremiyamu
I-xbox enye ayinxibelelani ne-intanethi
Isilumkiso sebhokisi emnyama ye-carbamazepine
Isebenza njani i-capstar